Puntland oo hoos u dhigtay khidmada bixinta shahaadada badqabka COVID-19
Puntland oo dabcisay khidmada bixinta shahaadada badqabka Covid19
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda caafimaadka Puntland oo Hoos udhigtay khidmada bixinta shahaadada badqabka COVID-19 ee dadka dalka dibaddiisa u Safraya
15,10,2020:- Wasaaradda caafimaadka Dawlada Puntland oo ka duulaysa falcelinta bulshada reer Puntland ee khidmada baaritaanka iyo helidda shahaadada badqabka xanuunka COVID-19 ee muwaadiniinta u safraysa dibbada, ayaa go’aamisay in la dhimo khidmaddaas lagana dhigo 35 dollar halka ay marki hore ay ka ahayd 50 dollar.
Wasaaradda oo ka jawaabaysa balanqaadkeedii ahaa inay hoos udhigi doonto khidmada shahaadada baaritaanka si bulshada ay u helaan adeeg wanagsan uguna helaan sida ugu sahlan ayay waxay hoos udhigtay khidmada laga qaado dadka qaadanaya shaahada badqabka Covid19 una safraya dalka dibadiisa. Waxaa hoos udhigidaan sababay sidoo kale marka wasaaraddu ay raadisay soona iibisay dawada baaritaanka.
Wasaaraddu waxay bulshada xasuusinaysa in khidmada laga qaado muwadiniinta lagu daboolo kharashaadka kala duwan ee shaybaarka iyo shaqada baaritaanka sida qalabka, agabka shaybaarka iyo wixii la mid ah. Waxay dowladdu ka shaqaynaysa sidii loo sii yarayn lahaa khidmada baritaanka iyo in bulshada reer Puntland helaan adeeg baaritaan oo jaban ama lacag la’aan ah.
Waxay wasaaraddu sido kale bulshada u balanqadaysa in muwaadiniintu helaan adeeg baaritaan oo dhamaystiran kaas oo tayadiisa lagu hubiyey halbeegyada caalamiga ah (international standards).
Waxaa xusid mudan in baaritaanka, daawaynta iyo dhamaan adeegyada kale ee la xiriira COVID-19 ee bukaanadu yihiin lacag la’aan, si toos ahna ushaqeeyaan shaybaarada Boosaaso, Garowe iyo Galkacyo laguna hawl jiro in inta badan gobolada laga furo shaybaarada.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa kamid ah dalalka uu sidda ba'an u saameeyay cudurka safmarka ah.
Coronavirus: Maamulka Jubaland oo digniin culus u diray ganacsatadda
Soomaliya 11.04.2020. 12:10
Soomaaliya oo bukaankii ugu horeeyay uu u dhintay Coronvirus
Soomaliya 08.04.2020. 18:38
Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumada Khayre oo shaqada laga eryay
Soomaliya 26.08.2018. 10:49
Qarax culus oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe [Fahfaahin]
Soomaliya 25.06.2018. 15:35
Xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay Xiisadda Balad-Xaawo [Daawo]
War Saxaafaded 11.01.2018. 23:38
Puntland oo Tallaalaysa Carruur ka badan 1 Milyan [Sawirro]
Puntland 01.01.2018. 23:16